I-Penguin 2.0: Iinyani ezine omele uzazi | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Meyi 24, 2013 NgoLwesihlanu, Meyi 24, 2013 I-Jayson DeMers
Yenzekile. Ngenye iposti yebhlogUkukhutshwa kwealgorithm, kunye neeyure ezimbalwa zokulungiswa, uPenguin 2.0 ukhutshiwe. I-Intanethi ayinakuze ifane. UMat Cutts upapashe umyalezo omfutshane ngesihloko ngoMeyi 22, 2013. Nazi iingongoma ezine eziphambili ekufuneka uyazi ngePenguin 2.0
1. IPenguin 2.0 ichaphazele i-2.3% yayo yonke imibuzo yesiNgesi ne-US.
Isandi esincinci se-2.3% kuwe njengenani elincinci, gcinani engqondweni ukuba kukho uqikelelo lwe-Google oluzibhiliyoni ezi-5 ngosuku. I-2.3% ye-5 yezigidigidi kakhulu. Indawo enye yorhwebo oluncinci inokuxhomekeka kwimibuzo engama-250 eyahlukeneyo yezithuthi kunye nengeniso. Impembelelo inkulu kunenani lokugqibela elinokucebisa.
Ngokuthelekisa, iPenguin 1.0 ichaphazele i-3.1% yazo zonke iiwebhusayithi. Uyazikhumbula iziphumo ezibi zoko?
2. Eminye imibuzo yolwimi iyachatshazelwa yiPenguin 2.0
Nangona uninzi lwemibuzo kaGoogle iqhutywa ngesiNgesi, kukho amakhulu ezigidi zemibuzo eqhutywa ngezinye iilwimi. Impembelelo yealgorithmic kaGoogle inwenwela nakwezinye iilwimi, ukubeka i-kibosh enkulu kwi-webspam kwinqanaba lehlabathi. Iilwimi zibuna ipesenti ephezulu ye-webspam iya kuchaphazeleka ngakumbi.
3. Ialgorithm itshintshile kakhulu.
Kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba uGoogle unakho ngokupheleleyo utshintshe ialgorithm kwiPenguin 2.0. Le ayisiyiyo idatha yokuhlaziya nje, nangona "iskim" segama elingu- "2.0" lisenza isandi ngaloo ndlela. Ialgorithm entsha ithetha ukuba uninzi lweendlela ezindala zogaxekile azisayi kuphinda zisebenze.
Ngokucacileyo, ayiloxesha lokuqala sidibana noPenguin. Nantsi imbali yeembumbulu zePenguin.
Nge-24 ka-Epreli 2013: Ipenguin 1. Uhlaziyo lokuqala lweepenguin lwenzeka ngo-Epreli 24, 2012, kwaye luchaphazele ngaphezulu kwe-3% yemibuzo.
Meyi 26, 2013: Uhlaziyo lwepenguin. Kwinyanga kamva, uGoogle wahlaziya ialgorithm, echaphazele iqhezu lemibuzo, malunga ne-01%
Nge-5 ka-Okthobha ka-2013: Ukuhlaziywa koonombombiya. Ekwindla lika-2012, uGoogle wahlaziya idatha kwakhona. Ngeli xesha malunga ne-0.3% yemibuzo ichaphazelekayo.
Ngomhla we-22 kaMeyi 2013: Ipenguin 2.0 ikhupha, ichaphazela iipesenti ezi-2.3 zayo yonke imibuzo
Njengoko uCutts wachazayo malunga ne-2.0, “Sisizukulwana esitsha kraca se-algorithms. Ukulungiswa kwangaphambili kwePenguin bekuya kujonga kuphela kwiphepha lasekhaya lesiza. Isizukulwane esitsha sikaPenguin siye nzulu kwaye sinefuthe elikhulu kwimimandla ethile emincinci. ”
I-Webmasters ezichaphazelwe nguPenguin ziya kuziva ngathi zinzima kakhulu, kwaye kuya kuthatha ixesha elide ukubuyela kwakhona. Le algorithm iya nzulu, oko kuthetha ukuba ifuthe lazo liyehla liye kuwo onke amaphepha ngokunokwaphula okunokubakho.
4. Kuya kubakho oonombombiya abaninzi.
Khange sive okokugqibela kwePenguin. Silindele uhlengahlengiso olongezelelekileyo lwealgorithm, njengoko uGoogle enze ngalo lonke utshintsho olwenziwe kwi-algorithm abaye bayenza. Iialgorithms ziyavela ngendawo eguqukayo yewebhu.
UMatt Cutts ukhankanyiwe, "Singalungelelanisa ifuthe kodwa besifuna ukuqala kwinqanaba kwaye emva koko sinokuguqula izinto ngokufanelekileyo." Omnye ophawulayo kwibhlog yakhe ubuze ngokuthe ngqo malunga nokuba uGoogle uza kuba “uyala na amaxabiso anyukayo wento yokunxibelelana nogaxekile,” kwaye uMnu. Cutts waphendula wathi, "oko kuza kamva."
Oku kuphakamisa ukuqiniswa okunyukayo kwaye, mhlawumbi, ukukhululeka okuthile, kwimpembelelo yePenguin 2.0 kwisithuba seenyanga ezimbalwa ezizayo.
Uninzi lweewebhu kunye nee-SEO ziye zacaphuka ngokufanelekileyo kwifuthe elibi lotshintsho lwealgorithm kwindawo yazo esempilweni. Ezinye ii-webmasters zikwi-niches ezidadayo kwi-webspam. Baye bachitha iinyanga okanye iminyaka besenza umxholo oqinileyo, besakha amakhonkco egunya eliphezulu, kwaye besenza indawo esemthethweni. Nangona kunjalo, ngokukhutshwa kwe-algorithm entsha, bafumana isohlwayo, nabo. Omnye umphathi webhsayithi encinci wakhalaza wathi, “Ngaba ibibubuyatha kum ukwenza imali kunyaka ophelileyo ndakhe indawo yabasemagunyeni?”
Ngokuthuthuzela, uCutts ubhale wathi, "Sinezinto ezithile eziza kamva ehlotyeni ezinokukunceda kuhlobo lweesayithi ozikhankanyileyo, ke ndicinga ukuba wenze ukhetho olufanelekileyo lokusebenzela ukwakha igunya."
Ixesha elingaphezulu, ialgorithm ekugqibeleni ibamba ngewebhupam. Kusenokubakho iindlela ezithile zokudlala inkqubo, kodwa imidlalo iye yehla xa iPanda okanye iPenguin ihamba kwibala lebhola. Kuhlala kungcono ukuthobela imigaqo yomdlalo.
Ngaba uyachaphazeleka nguPenguin 2.0?
Ukuba uyabuza nokuba iPenguin 2.0 ikuchaphazele, Unokwenza uhlalutyo lwakho.
Jonga uluhlu lwamagama aphambili. Ukuba benqabile kakhulu ukuqala ngoMeyi 22, kukho ithuba elihle lokuba indawo yakho ichaphazeleke.
Hlalutya amaphepha afumene olona khonkco kugxilwe kulo, umzekelo iphepha lakho lasekhaya, iphepha lokuguqula, iphepha lodidi, okanye iphepha lokufika. Ukuba ukugcwala kwenqabe kakhulu, lo luphawu lwePenguin 2.0 yeempembelelo.
Khangela naluphi na utshintsho olunokubakho lwamagama aphambili kunamagama aphambili. Umzekelo, ukuba ufuna ukubeka kwinqanaba le "windows vps," kunokuhlalutya amagama aphambili anje nge "windows vps hosting," "get windows vps hosting," kunye namanye amagama aphambili.
Landa umkhondo wetrafikhi yakho ephantsi kwaye ubanzi. uphando kubahlalutyi ngumhlobo wakho njengoko ufunda indawo yakho, emva koko uphinde uchache nakweyiphi na impembelelo. Nika ingqalelo ekhethekileyo kwipesenti ye-organic traffic, kwaye wenze njalo kuwo onke amaphepha akho aphambili eziza. Umzekelo, fumanisa ukuba ngawaphi amaphepha ayenelona nani liphezulu le-organic traffic kwinyanga ka-Epreli 21-Meyi 21. Emva koko, khangela ukuba la manani atshona ukuqala ngoMeyi 22.
Owona mbuzo ngowokuba “andichaphazelekanga na mna,” kodwa “ndenza ntoni ngoku xa ndithe ndachaphazeleka?”
Ukuba uchaphazele iPenguin 2.0, nantsi into ekufuneka uyenzile:
Ungabuya njani kwiPenguin 2.0
Inyathelo 1. Phola. Izakulunga.
Inyathelo 2. Chonga kwaye ususe i-spammy okanye amaphepha akumgangatho osezantsi kwiwebhusayithi yakho. Kwiphepha ngalinye elikwisiza sakho, zibuze ukuba ngaba libonelela ngenene ngexabiso kubasebenzisi okanye nokuba likhona nje njengokutya kweinjini yokukhangela. Ukuba impendulo iyinyani ukuba yeyokugqibela, kuya kufuneka uyongeze okanye uyisuse ngokupheleleyo kwindawo yakho.
inyathelo 3. Chonga kwaye ususe ugaxekile amakhonkco angenayo. Ukuchonga ukuba loluphi unxibelelwano olunokuhlisa amanqanaba akho kwaye lubangele ukuba uchaphazele iPenguin 2.0, kuyakufuneka wenze i uphicotho lweprofayile yekhonkco engenayo (okanye ube nengcali ikwenzele). Emva kokuba uchonge ukuba zeziphi amakhonkco ekufuneka zisuswe, zama ukuzisusa ngokuthumela i-imeyile kwii-webmasters kwaye ubacele ngesidima ukuba basuse ikhonkco kwiwebhusayithi yakho. Emva kokuba uzigqibile izicelo zakho zokususa, qiniseka ukuba ungazichazanga, usebenzisa Isixhobo seDisavow sikaGoogle.
Inyathelo 4. Zibandakanya kwiphulo elitsha lokwakha ikhonkco. Kuya kufuneka ubonakalise kuGoogle ukuba iwebhusayithi yakho ikulungele ukubekwa kwindawo ephezulu kwiziphumo zokukhangela. Ukwenza njalo, uyakufuna iivoti ezithembakeleyo zokuzithemba kubantu besithathu abathembekileyo. Ezi voti ziza ngohlobo lwamakhonkco angenayo avela kwabanye abapapashi iGoogle ethembayo. Chonga abaphi abapapashi bakaGoogle abakuluhlu oluphezulu lweziphumo zophendlo zamagama aphambili kunye nokunxibelelana nabo malunga nokwenza iposti yebhlog yeendwendwe.
Isicwangciso esomeleleyo se-SEO ukuya phambili siyakwala ukwamkela okanye ukuzibandakanya kwiindlela zokwenza umnqwazi omnyama. Iyakwamkela kwaye idibanise Iintsika ezi-3 ze-SEO ngendlela yokongeza ixabiso kubasebenzisi kunye nokuseka ukuthembana, ukuthembeka, kunye negunya. Gxila kumxholo onamandla, kwaye usebenze kuphela neearhente ze-SEO ezaziwayo ezinerekhodi eqinisekisiweyo yokunceda iisayithi ziphumelele.
tags: Google +ipenguiniphengwini 2.0enjini yokukhangela nounSEO